State of Android – AsiaApps
February 6, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on လူသုံးအများဆုံး Android Version အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့ Nougat!
လူသုံးအများဆုံး Android Version ဟာ Nougat ဖြစ်သွားသလို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Oreo ကိုအသုံးပြုသူအတိုင်းအတာ ဟာလည်း 1 % ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ Android Developer ဆီကသိရှိခဲ့ရတာပါ။ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတုန်းကတော့ Marshmallow ဟာလူသုံးအများဆုံးဖြစ်နေပြီး Oreo…
January 10, 2018 January 10, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Android Oreo version ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိသေး!
Oreo ဆိုတာကတော့ Android ဖုန်းတွေအတွက်နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ version ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ android user ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ Android Oreo ထွက်ရှိထားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ကဖြစ်တာကြောင့်…